DAAWO: Feysal Waraabe “Nasiib darro waxaan u tagnay Madaxweyne cadhaysan oo dulmi tirsanaya” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Feysal Waraabe “Nasiib darro waxaan u tagnay Madaxweyne cadhaysan oo dulmi tirsanaya”
May 25, 2022 Xuseen 4
Kulan xalay dhexmaray Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Madaxda xisbiyadda mucaaradka ah ee Somaliland, ayaa kusoo dhamaaday fashil, kaddib markii la isku mari waayay qodobadii looga hadlayay.
Wada-hadalkan ayaa diirada lagu saaray qabsoomida doorashada Madaxtooyada Somaliland, oo loo madlan yahay bisha November ee sannadkan 2022, balse Madaxweyne Biixi ayaa lagu eedeeyay in uu doonayo in muddo kordhin uu sameysto.
Gudoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa sheegay in Muuse Biixi ay kala kulmeen caro iyo in eedeeyay mucaaradka, isagoo intaas ku daray in kulanka dhexmaray uu kusoo dhamaaday natiijo la,aan.
Maantana ma maamul-XAAFADEEDKII aannu oodwadaagta ahayn baa isku dul rafanaya?!
Aniga oo ah madaxweynaha dawladda SSC, xal baan idiin hayaa maaddaama aanan doonayn in aad igu soo qaxdaan. Tan koowaad, waxaa iimuuqda in 2 sannadood loogu daro kornaylada. Tan labaad, sidaa si le’eg waa in xisbiyada 3da ahna loogu daraa 2 sannadood. Marka intaa la isla afgarto, waa in marka danbe ee ururada la furayo ay marka hore ka soo horraysaa doorashada madaxweynuhu. Taa micnaheedu waxa weeye in 3da xisbi ee hadda jiraa oo kaliya ay ka qayb galaan doorashada, oo doorashada madaxweynaha kaddibna ay 3da xisbi noqdaan ururo.
Suurtagal ma aha oo meesha ma qabato oo waa la isku dilayaa haddii la yidhaahdo, sida ay hadda kornayladu wax kuwadaan, doorashada madaxweyne-xaafadeedkana dib baa loo dhigayaa oo 3da xisbina ururro ha noqdaan.
Gunaanadkii, talo waa ta aan kor ku xusay, waana masuuliyad i saaran in aan waxka idhaahdo maamul aan oodwadaagnahay oo dhibkoodu uu saamayn TABAN igu yeelan karo.
Waxa aanan nimanka furista ururada u durbaan tumaya (ee ay ugu horreeyaan prof. Axmed Ismaaciil Samatar, Dr. Gaboose & Buubaa) u sheegayaa in marka hore tan madaxweyne-xaafadeedka la qabto oo 3dexda xisbi ee hadda dhisan lagu galo AMA la qaato talada aan kor kuxusay oo waxaba loo sameeyo muddo kordhin, iyada oo mar walba ay 3da xisbi oo kali ahi ka qayb galayaan doorashada madaxweyne-XAAFADEEDKA, oo markaa kaddibna ninkii urur furanyaa uu furto.
Waa madaxweyne-XAAFADEEDKA mandaqadda SSC, oo sidii caadada u ahaydba talo MUG leh siiya BIL-SADDEXDA madaxkanoosha ah ee ka dhisan min Lawyacaddo illaa Libooye, markii jiheeyuhu ka lumo oo ay isku dhex yaacaanba. Ciddii talo intaydaa dhaafsiisan hayana meesha ha soo dhigo. Wbt
Halkee baan oodwadaag Ku noqoney ? Sool ,Sanaag iyo Cayn waa dhul SNM Somaliland ah.
Waxaan kuu ogolnahay in aad Ku noolaankartid dhulkaas laakiinse ma sheegankartid .
Waar Hargaysaa qiiqaysa haddaan alle ur u bixin, adna waxaan loojoogin baad ka hadlaysaa. Xal & talaa lagaa rabaa ee “niic” lagaama rabo! Wixii 30ka sannadood lagugu shubayey baan lagaa shubin.
Somaliland teni wa xalisante toda alaha u xaliyo.